Guddoomiyaha Xisbiga Waddani Cabdilqadir Jirde iyo wafdi uu hoggaaminayey oo xalay Magaalada London kulab soo dhaweyn ah loogu sameeeyey + Sawiro |
Guddoomiyaha Xisbiga Waddani Cabdilqadir Jirde iyo wafdi uu hoggaaminayey oo xalay Magaalada London kulab soo dhaweyn ah loogu sameeeyey + Sawiro
Hoolka xafladda oo aad u buuxay, rag iyo dumarna si weyn looga soo qayb galay, ayaa iila muuqatay mid ay hoggaanka u hayeen, dad malaha ku cusub qaabka xafladaha loo xidhiidhiyo ama loo maamulo, waxana aan arkayey dadkii xafladda joogay oo aad ugu diiqay sida aadka u liidata ee ninka ama dadka hawsha waday u hagayeen hab socodka xafladda.
Marka aad hoolka soo gasho waxa ay ishaadu ku dhacaysey kuraas iyo miisaska wax lagu cuno oo qaawan ama aanay dul oollin malqaacado iyo foogag iyo afmarisyo, waxan is weyiidyey in meesha cunto lagu cunayo, haddana maya ayaan is idhi. Meel meel ayaan ka arkayey dhalooyinka biyaha, iyo qasacadaha sharaabka oo madhan, in ay dadkii fadhiyey soo qaateen ayaanan fahmay. Xanta xisbiga UK oo aan qurux badanayn is qab qabsi iyo wada shaqayn la’aani ka jirtana waan la socday, haddana sidaasi ayey xisbiyada kale shidhka u galayaan. Waxan ka mid ahaa dadka safka hore fadhiyey, ee xiisaha u qabay bal in ay dhageystaan Guddoomiye Jirde iyo Marwo Amina Siciid oo aan in badan ka daawaday TVyada iyo Video yada. Sidoo kale dadka xafladda joogayna ila mid ayey ahaayeen. Laakiin xidhiidhiyuhu waxa uu nagu ciqaabay qudbado qarboosh ah, oo aan intooda badani nuxur iyo warbixin midna lahayn, isla markaana aan hore ugu qorshaysnayn, isla markaana aan ka dareemayey in uu xidhiidhiyuhu ku raalli gelinayo dad doonayey in ay mar uun makrafoonka qabsadaan, waxa uu mar walba lahaa, iga raalli ahaada nin uun baan u yeedhayaa ama dumarka ayaa i soo eegaya oo aan mid siinayaa. Taasi oo dadka u muujinaysey kalsooni darrada ama raalli gelinta dad gaar ah oo aan u qorshaysnayn. Markii aan u kuur galayna waxa aan ogaaday in ay dhallin badani kolba talo iyo warqad yar u keenayaan.
Iyada oo ay ciqaabta noocaasi ahi jirtay, haddana waxan ku adkaystay in aan sugo Jirde iyo Amina Siciid. Waxan sugaba, saacaddiina ay is gurtaba, saddex saacadood iyo afar ayaa ii dhammaaday, welina waxan eegayaa wiilka xidhiidhinaya xafladda iyo bal in uu Makrafoonka siiyo xubnaha cul culus ee madasha loo yimid. Illayn ciil kuma qabto, mar mar baan hollanayey in aan iska baxo sida dadka qaar, oo danahayga qabsado, waayo waxa meesha ka socda, ee aan nuxurka lahayn ayaan ku daalay, haddana waan is dajiyaa, oo waxan nafta u sheegaa in aan sugo mas’uuliyiinta aan soo dhaweyntooda ka qayb galay.
Ugu danbayntii waxa macrafoonkii la guddoonsiiyey Marwo Faadumo Siciid oo naga gelgishay wixii meesha naga qabsaday, xafladdiina boodhka ka jaftay, sidii lagu yaqaannayna cod macaan oo hufan ku jeedisay hadallo aad dadka u soo jiitay, haba u badnaadeen dhalliisha xisbiga Kulmiye, oo ay ku soo koobtay…..Kulmiye waxan ku xasuusan doonnaa ciidan la yidhaa RRU oo saqda dhexe u soo dhacda xaafadaha, oo carruurta ka sasisa, waxan Kulmiye ku xasuusan doonnaa in ay dhagar qabayaal yihiin, oo intii ay dalka xukumayeen la dilay boqollaal dhalin yar ah, waxan Kulmiye ku xasuusan doonaa in ay ahaayeen kuwa ugu xadhiga badan suxufiyiinta….waxan ku xasuusan doonaa….waxan ku xasuusan doonnaa…ugu danbayntiina waxa ay u gudubtay, warbixin kooban oo dhulkii iyo heer caalamiba ah. Si gaar ahna waxa ay diiradda u saartay, sida ay dawladda Ahmed Siilaanyo meesha uga saareen ictiraaf raadintii iyo rajadii dawladnimo ee wakhtigii Rayaale kaabka innoo saarrayd.
Kadibna xildhibaan Abdirahman Xoog oo laba kalmadooda saddex daqiiqo ku dhammaystay ayaa markiiba ku soo dhaweeyey guddoomiyaha xisbiga Waddani Mudane Jirde, oo malaha isaga laftiisu ku daalay qudbadihii aan intooda badani macnaha lahayn.
Guddoomiye Jirde maaha nin aynu halkan kaga sheekayn karro, hufnaanta, aqoonta iyo aftahannimada uu ku hadlayeyna maaha mid aan qiyaasi karo. Markii uu hadalka qaatay ee uu in yar hadlayeyna waxa mar kaliya joogsatay shanqadh oo dhan, dadkuna waxa ay si cajiib ah ugu dhag raaricinayeen qudbadda uu jeedinayey oo xambaarsanayd nuxur badan.
Jirde waxa uu hadlkiisa ku bilaabay, salaan iyo duco, waxa uu ka warramay dalkii Somaliland oo uu muddo usbuuc ka yar uun ka sokeeyey. kabidna waxa uu u guda galay arrimo xasaasi ah, oo daarran xisbiga Waddani, dacaayadaha uga yimaadda xisbiga Kulmiye iyo sida ay hay’adihii dawliga ahaa u bur bureen.
Jirde waxa uu yidhi, ‘Dalkii malaha kama wada war haysaane, waxa uu u gacan galay dad aan u naxayn, hantidiisii waxa lagu hayaa boob, shacabkii waxa lagu qaybiyey qabyaalad. Madaxweyne Siilaanyo oo aan u arkaynay nin qiimo leh, waaya arag ah isla markaana aanu jirin nin dawladnimo uga aqoon badani meesha waxba kuma hayo, anigu ma garan meesha ay wax ka qaldan yihiin. Muse Bixi saaxiib ayaan ahayn isku wakhti ah, sida ay wax u dhacayaanna wuu arkayaa, isaga iyo xisbiga uu madaxda ka yahayna waxan odhan karaa dhibta dalka ka dhacaysa waa ka qayb.
Dalkii iyo dadkii waxa ku dhacay abaar aad u xun, immigana waxaban maqlayey in xoolihii uu Saudi gu iinga iibsan jiray uu joojiyey. Taasina dhabar jab dhaqaale oo dadkii soo food saartay. In aad abaarahaa u gurmataanna waan idinka codsanayaa.
Hay’adihii dawliga ahaa sida xisbiyada iyo gobolayaasha waxa ay dawladda Siilaanyo ku hayaan dagaal aan xad lahay, waad arkaysaan sida xisbiyadii UDUB iyo UCID cagta loo mariyey, Waddanina way ka takhalusi lahaayeen laakiin fursad ayey u la’yihiin. Weerar joogta ah ayeyse nagu hayaan. Tusaale ahaan nin ganacsade ah oo noo baahan, ayaaba noo soo xaytay, oo doonaya in uu nagu yidhaa lacag qaata oo ka soo baxa xisbigaasi. Aniga ayaa la iila yimid, Xirsi ayaa loola yimid Uur Cadde iyo muddakar kale ayaa loola yimid. Waan diidnay, laaluush iyo in aan mabda’yaga iibsannana waxan ka door bidnay in aan dalka isbeddel qiima leh u keenno. Sinnaan iyo caddaalad ku soo dabbaallo.
Arrimaha dibadda waxa idiinka warrantay Faadumo Siciid oo dib ugu noqon maayo, waxase aan jecelahay in aan bal is yara dul taago, dacaayado raqiis ah oo Kulmiye sheeko ka dhigto, kuwaasi oo wax lagu qoslo ah. Laakiin ay dad badan ku qaldi karaan.
Aniga ( Jirde ) waxa i qaabilsan koox igu sheegta in darbi la ii dhiibay, Xirsi waxa ay u sameeyeen koox wasiirro u badan oo aan malaha Madaxtooyada geli karin haddii aanay wax ka sheegin. Ismail Buubaa waxa loo samaystay koox ku tilmaanta in uu yahay dillaal ay Somalia soo dirsatay. Xisbiga Waddani waxa ay ku sheegaan in ay Habar Yonis leedahay. Intaasi iyo ino kale oo badan aan idiin kala iftiimiyo.
Horta aniga darbi la iima dhiibin, dhabarkaygana lagama samayn gacmo isku dhiib, sharciga aan Guddoomiyaha ku meel gaadhka ah ku noqday iyo ka Xirsi uu hoggaamiyaha ku noqday iyo qaabka aan xisbiga u dhignay, aniga ayaa gacantayda ku qoray, aniga oo dheeganaya sida xisbiyada caalamiga ahi u dhigan yihiin. Markii aan qaabkan cusub oo qoraal ah soo diyaariyeyna wax ka beddel yar yar mooyaane, sidiisii ayaa loo sharciyeeyey. Aniga iyo Xirsi oo ay jecel yihiin in ay isu kaaya soofeeyaanna waxan nahay saaxiib aan cidi kala dhex marin, haddii ay cidi gacamo hoose is weydaarsadeenna ani iyo Xirsi ayaa is weydaarsannay. Saaxibbada kale ee aan ku wada jirro hoggaanka xisbiguna waa rag sharaf leh, mas’uuliyiin ah, oo aan isku mabda’ nahay.
Mar uu ka hadlay Seed iyo shirkii xisbiga waxa uu yidhi, ‘ Seed waa nin qiima leh, waxa uu ka mid ahaa raggii xisbiga sida fiican iigu soo dhaweeyey, ixtiraam badan ayaanan u hayaa+, waxanan u arkaa in aanay wax caddaalad darro ahi ku dhicin, doorasho marka la galana waa la kala badiyaa. Waxanan filaynay in uu xisbiga nala joogo, oo uu cadhada ka soo noqdo, laakiin haddana sidaa uu doortay ayey arrini u dhacday. Ceebna ka sheegi mayno’.
Mudane Jirde markii uu qudbadda noocaasi ah jeedinayey waxa ishiisa ka muuqatay, run sheegis ay caaddifadi ka madhan tahay, isku kalsooni qofnimo iyo kal gacalada loo dhageysanayo oo uu la qiiroonayey. Sacabka iyo qosolka ayaa dhextaal ahaa, dadkuna inta ay kuraastii ka soo kaceen ayey kuurka u galeen qudbaddii uu jeedinayey. Inkasta oo diirrimaadka xafladdu ay bilaabantay markii Marwo Faadumo Siciid ay madasha ka hadashay.